နာမည်ကြီးအနာဂတ္တိ: အဆိုပါပီတိနှင့်ကျော& | Apg29
537 online! | Sidvisningar idag: 13 891 | Igår: 192 970 |
နာမည်ကြီးအနာဂတ္တိ: အဆိုပါပီတိနှင့်ကျော&ကအနာဂတ္တိ Olav Rogde အားဖြင့်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ Kaj Östholm ။ ထိုညီလာခံရဲ့ပီတိနဲ့ Olav Rogde အားဖြင့် 79 နှစ်သမီးအရွယ်ထက်ကျော်လွန်အကျော်ကြားဗျာဒိတ်တော်။ လူတိုင်းသည်ဤဖတ်သင့်!
"အခုကပထမဦးဆုံးသတင်းစကားကိုအော်စလိုမှလာကတည်းကသုံးနှစ်ခွဲနာရီဖွင့်, ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်နိုင်ငံအားလုံးမှလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်အသစ်အစီရင်ခံစာများကထွက်လှည့်။ "ဤသည်ဒီဇင်ဘာ 11, 1952 ရေးသားခဲ့။
ငါဘာဂန်အတွက်ဆုတောင်းပဌနာဖြစ်၏စဉ်အဘယ်သို့ငါရေးထားပြီ, ငါ့ထံသို့ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အလွန်မျက်မှောက်အားဖြင့်ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ ငါသည်တစာအုပ်ထဲတွင်ဖတ်ရှုခြင်းခံခဲ့ရလျှင်ကြောင့်သေးငယ်တဲ့စာအုပ်ငယ်ငါ့ဆီသို့ရောက် လာ. , ထိုပီတိစိတ်ကူး့အခိုက်မှာ, မငါ၏အကြံအစည်၌ရှိ၏။
ဒါဟာကိုယ်ကချရေးမယ်လို့ငါ့ဆီသို့ရောက် လာ. , ဒါပေမယ့်တကဗျာဒိတ်အဖြစ်ပဲငါ့အဘို့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါငါ့ထံမှကြောင်းစိတ်ကူးရိုက်နှက်လိုနှင့်ပဲစိတ်ကူးစိတ်သန်းခဲ့ကြောင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောပေမယ်ငါသည်ငါ၏စိတ်တွင်တိတ်ဆိတ်မရခဲ့ပေလိမ့်မည်။
ငါသည်ဘုရားသခင်ကပြောသည်။ ငါသည်ဤမအောက်မေ့နိုင်ပါ။ ဒါဟာရေးမှတ်ရမည်ဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်သင်သည်နောက်တဖန်ငါ့အကြောင်းကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲသည် သွား. ဒါကြောင့်နောက်တဖန်အကြှနျုပျကိုကူးလာကြသည်။ ဒါဟာထိုင်ကာသတင်းစာတစ်ခုသို့မဟုတ်စာအုပ်ကနေဇာတ်လမ်းဖတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ဒါဟာညဦးယံ၌တကျိပ်ခဲ့သည်။ ငါသည်တခဲတံကိုကိုင်တယ်။ ဒါဟာကိုယ်ကဆငျးသကျ wrote ဘယ်မှာဟောင်းမှတ်စုစာအုပ်ခဲ့သည်။ ငါ wrote နှင့်အချိန် wrote နီးပါးတနံနက်၌ရှိ၏။ အခြောက်လှန်းသောအခါ, ငါမပို။
အခုကတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါမူကားမျက်မှောက်တဆယ်နာရီမှာတစ်ညနေခင်းပြန်ရောက်လာပါတယ်။ ဒါဟာချွတ်ကျန်ရစ်ဘယ်မှာမှတိုက်ရိုက်အဆက်ခဲ့သည်။
ဒီတော့ဇာတ်လမ်းကစတင်ခဲ့သည်ဒါဟာမစ္စစ် Andersen ကထိုသူငယ်များအဘို့, သားသမီးရဲ့နာရီကိုနားထောငျ, ရေဒီယိုများကထိုင်လျက်, နံနက်ယံ၌ကိုးနာရီလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနည်းနည်းဘာသာတရားကိုလည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့, ယနေ့ဒါကောင်းသည်နှင့်အစဉ်မပြတ်ဖြစ်သင့်ကြောင်း။ ငယ်ကကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, မများလွန်း, နည်းနည်းဘာသာတရား၏ပဒေသာခံစားရတယ်။ တီဗီအိမ်ရှင်ရုတ်တရက်ပြတ်တောက်ခဲ့တဲ့အခါလေးငါးမိနစ်ပြီနိုင်ဘူး။
အော်စလိုမြို့ရိုင်းသောထိတ်လန့်ခဲ့သည်! ရဲတပ်ဖွဲ့အာဏာပိုင်များကထူးခြားသောအရာတစ်ခုခုပေါ်သွားခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်, အတော်လေးတွေအများကြီး, တကသဲလွန်စမပါဘဲပျောက်ကွယ်သွားသောသူမည်မျှကလေးများနှင့်လူကြီးများ, သေသေချာချာပြောပါတယ်မရနိုင်ပါ။
အဆိုပါအာဏာပိုင်များလည်းအများအပြား၏ဖြစ်ရပ်တွင်, ပျောက်ဆုံးနေသည်ခေါ်ဆိုမှုမယူဆနိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့သူတို့တတ်နိုင်သမျှသတင်းအချက်အလက်များကိုမိသားစုဝင်တစ်ဦး, ပျောက်ဆုံးသူမိသားစုများကတိုက်တွန်းကြသည်။
သူတို့ကရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားမိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ရေဒီယိုမဟာ Square ကိုသူတို့ရဲ့အလုပ်ဖျော်ဖြေ၏အလယ်တွင်သင်တန်း, ရုတ်တရက်စျေးသည်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲပျောက်ကွယ်သွားကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
တစ်ပွင့်ကိုဖောက်သည်သူမတစ်ဦးအပွင့်အဘို့ပေးဆပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်, နှင့်လူသည်ရပ်လျက်ရှေ့ဆက်သူရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားသောအခါကြီးမားသောအိတ်ကနေပိုက်ဆံ၏ပြောင်းကုန်ပြီရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။ သူမသည်သငျသညျယရှေုကိုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သူ့ကိုပြောပါကျွန်တော်ကြားလျှင်, ဒါပေမယ့်သူမကနောက်တဖန်သူ့ကိုမြင်တော်မူ၏။ သူမကသူမ၏များ၏ရှေ့မှောက်၌အခိုးအငွေ့နှင့်တူတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်သူမသည်သူမ၏မျက်စိပွတ်ပေမယ်လူ, မြူခိုးကောင်းစွာသွားကြောင်းခဲ့သည်။
တကယ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအော်ဟစ်နေတဲ့မိန်းမငယ်, စတင်ခဲ့သူမကိုဆုတ်နှင့်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောတွန်းလှည်းသို့ဝမ်းခွဲအဖြစ်, သူမတစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကလေးခိုးယူခဲ့သည်အော်ဟစ်ပတ်ပတ်လည်သို့ပွေးလေ၏ထိုအချိန်တွင်ကြောင့်ရှစ်လကြာတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူအဘယ်မှာရှိသနည်း ရဲတပ်ဖွဲ့အဘယ်မှာရှိကြသနည်း
ရဲတပ်ဖွဲ့ရှိကြ၏ဒါပေမဲ့အားလုံးနှစ်ဖက်မှပြုနိုင်သောအရာကိုသောကြောင့်အော်ဟစ်ခြင်းနှင့်ဆူညံသံ resounded ။
တစ်ဦးကကြီးမားထူထဲသောစီးပွားရေးသမားကသူ့ဆိုင်မှာထဲကတဟုန်တည်းပြေးနဲ့အော်ဟစ်, ကူ, ကူ, သူ့လက်ထောက်နှစ်ယောက်ပဲကောင်တာမှာသူတို့ရဲ့ထိုင်ခုံကနေရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ထို့နောက်?
ယခုမှာကိုပင်ဟေဂင်နှင့်ဟယ်လ်စင်ကီအလားတူဖြစ်စဉ်များဖော်ပြခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်အပန်းဖြေ မှစ. လည်းပျောက်ဆုံး၏အစီရင်ခံစာများသို့စီးဆင်းရန်စတင်။ နေရာတိုင်း ထွက်. လည်သောသူကလေးများနှင့်လူကြီးများရှိပါတယ်။ ရဲဒီနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေကျော်စိတ်မပျက်နှင့်အာဏာမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
အဘယ်သူမျှမမျှမပါဤသူကားအဘယ်သို့သောမစ္စစ် Andersen က, သခင်ဘုရား, ကပြောပါတယ်? သူမသည်တက်ရရှိသွားတဲ့နှင့်တံခါးဝမှထွက်ဝင်ခြင်းနှင့်လမ်းပေါ်ကိုဆင်းကြည့်ရှုပါ။ ဒါဟာလှပသောလူနေအိမ်ဧရိယာတစ်ဝိုက်တစ်ဦးခြံစည်းရိုးနှင့်အတူကောင်းတဲ့နည်းနည်းအိမ်တော်ဖြစ်၏။
အဲဒီမှာမစ္စစ် Hollan သူမကသူမ၏မျက်စိကျော်လက်ကိုရရှိထားသူနှင့်အော်ဟစ်, ဒါကြောင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ရုသ်, ရုသ, သူမမစ္စစ် Andersen ကရှုမြင်သကဲ့သို့သင်သည်မည်သည့်လူစိမ်းကြီးပြင်းအတိတ်၏မြင်ကြပြီ, မေးမြန်း, ရုသသွားကြောင်းဖြစ်ပါသည်, သူမအိမ်စဉ်ပြင်ခြေလှမ်းများပေါ်မှာထိုင် ငါရပ်နှင့်တစ်နှင်းဆီခြုံနှင့်အတူစီစဉ်ပေး, ဒါကြောင့်သူမပျောက်ကွယ်သွားလုံးဝသွားပြီ, ငါငိုရုသဟစျကျွောလေ၏, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကလညျး, ငါတစ်ခုခုထရံကိုတလျှောက်တက်သွားလေ၏ရုံကိုပြု၏, ဒါပေမယ့်လူတန်းကျင်တတ်အဖြစ်တယောက်လုံးဝရှုပ်ထွေးဖြစ်လာ မြင်ထို့ကြောင့်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ထင်ပေမယ်ရုသရုသ်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့ရှိသနည်း သူမ၏ယူသူကားအဘယ်သူသူမကစိတ်ပျက်လက်ပျက်အတွက်အော်ဟစ်။
ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာ Andersen ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဤအချိန်တွင်ယခုလိမ့်မည်လော ဇနီး Andersen ကနာရီကိုအံ့သြထက်ဝက်သာ-တဆယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါကဆိုင်ရှိကျော်သက်သက် muddle အရာအားလုံးရဲ့တော့ဘူးအပေါ်ကိုင်လို့မရပါဘူး။
သူစတင်သကဲ့သို့, သူအစည်းအဝေးများမှသှားသောခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ပြောဆိုထားသည်ခဲ့သည်သို့သော်ငါသည်သူ၏နာမကိုသတိရကြပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကပြောပါတယ်။ အခုဆိုရင်အခုကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်, ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကဘာလဲငါမေး
ဒါကြောင့်သူ့ကိုနားထောငျတျောမှကြောက်မက်ဘွယ်သောခဲ့, ငါဆွေးနွေးချက်လုပ်နေတာရပ်တန့်ဖို့သူ့ကိုမေးခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်သူကစားရကြ၏ပိုမိုဆိုးရွားများနှင့်ဆိုးရွားပြုမူ။
ဟုတ်ကဲ့ကြောင့်ထိုနညျးတူသူအများအပြားဆက်ဆက်ရှိကြ၏။ သို့သော်ထိုမြို့အတွက်ချကပင်ပိုမိုဆိုးရွားခဲ့သည်။ ဒါဟာယာဉ်မောင်းတဆင့်တွားဖို့ကြိုးစားခဲ့ကွောငျးစင်ကြယ်သော gridlock ခဲ့ drivers တွေကိုဘတ်စ်ကား, ကားအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ခရီးသည်ထံမှပျောက်ကွယ်သွားခဲ့, ပေါ်လာတာဟာအရင်ရပ်တန့်နှင့်တာရှည်လိုင်းများထဲမှာရပ်နေ၏ခဲ့များနှင့်ဘတ်စ်ကားများနှင့်ကားများ။
မစ္စစ်ဟော်လန်မိမိတို့လက်နှင့်ပြေးအိမ်မှာ wringing, ဟစျကျွော။ Andersen ကနှင့်သူ၏ဇနီးရိုက်ထည့်ပါ။ အဆိုပါရေဒီယိုဘာဂန်မှသတ်မှတ်ထားသည်။ ပျောက်ဆုံးနေလူအပေါ်ဖော်ပြခဲ့သည်အားလုံးလမ်းညွန်မှသည်။
ပင်လယ်ရေအပေါ်အများအပြားသင်္ဘောများ မှစ. လူပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ အဆိုပါ BB ဌာနများအားလုံးအသစ်ကကလေးမွေးဖွားပျောက်ကွယ်သွားနှင့်မိခင်များစိတ်ပျက်လက်ပျက်အတွက်မြည်တမ်းရှိသည်။ assistants နှင့်သူနာပြုများသည်အလွန်ကြောက်သော်လည်း, တောင်သူတို့တွင်အချို့သည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ သူနာပြုခုနှစ်တွင်နေအိမ်များလည်းအများအပြားအပိုင်းပိုင်းပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။
တကျိပ်တပါးသောနာရီမှာနာရီလောက်မှာကိုးကယနေ့အချိန်တွင်ရုတ်တရက်ကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားကိုတွေ့ကြပြီမဟုတ်၏နည်းနည်းလေးသဲလွန်စရှာတွေ့နိုင်ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲ, ကလေးများနှင့်လူကြီးများတွေအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့သမျှသောဗြိတိန်နိုင်ငံကျော်ကနေမက်ဆေ့ခ်ျများလာပြီစတင်ခဲ့ကြောင်း။ လန်ဒန်ကနေရေဒီယိုဤအချိန်အသိပေး မြေတပြင်လုံးအရာနက်နဲသောအရာတခုကိုဖြစ်ပါတယ်။
ကွာဘုရားရေးရာအဖွဲ့ဝင်များတချို့ကဓမ္မဆရာအသင်းတော်များခေါ်ပြီ, ထိုသို့သွားကြောင်းနေသောဆုံးဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းခြင်းနှင့်ဆုတောငျး၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်များကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တောင်မှတချို့ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်တရားဟောဆရာကိုပျောက်ကွယ်သွားတို့တွင်ဖြစ်သင့်သည်။ အဓိကဘာသာတရားအတွက်တစ်ဦးကဘိရှော့အစည်းအဝေးတစ်ခုယနေ့ညသူတို့ရဲ့ယဇ်ပုရောဟိတ်ခေါ်ပြီ။
ကိုရီးယားနှင့်မြောက်ကိုရီးယား-တောင်ကိုရီးယား၏အမှု၌။ ဒါကြောင့်သူတို့ကတဦးတည်းသို့မှီဝဲဖြစ်လာကြပါပြီ။ အရှေ့ခုနှစ်တွင်ကိုရီးယားကနေပေါင်းစပ်တပ်ဖွဲ့များထံမှအများအပြားစစ်သားအပါအဝင်တထောင်တရာတော်တော်များများမှပျောက်ဆုံးသူတို့၏အမျိုးအဘယ်မှာခန့်မှန်းအရေအတွက်အများဆုံးတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်သတင်းစကား, လာကြ၏။
ကြောက်လူတိုင်း, ကြောက်သည်လမ်းများပေါ်တွင်လူပြန်ပြေးနဲ့သူတို့ရဲ့လက်ကို wring, သူတို့သားသမီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသူအထူးသဖြင့်မိခင်များ။ သို့သော်လူအများကဲ့ရဲ့နှငျ့ဘုရားသခငျနှငျ့လူကိုကျိန်ဆဲ။
တစ်ဦးကသင်တို့ကိုအဘယ်သူကိုက်ညီ, သငျသညျ fit, သူသူမ၏လက်ကို wringing နှင့်အော်ဟစ်ခဲ့လမ်းပေါ်ကိုဆင်းပြေးဖြစ်ပါတယ်, ကျနော်တို့မကြာမီထိုသူအပေါင်းတို့ဖမ်းမိလိမ့်မည်, မိမိစိတ်လုံလောက်တဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဦးသက်ကြီးရွယ်အိုများအမြိုးသမီးတခေါက်လက်နှင့်တစ်ထောင့်မှာရပ်နေနှင့်မိုဃ်းကောင်းကင်သို့တက်ရှာဖွေနေသူမကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်သူကိုဒီမှာခဲ့သောအခါကြှနျုပျတို့ရှိထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလေသောအခါအိုးမကဖြစ်နိုင်နောကျမှယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်, ယရှေုကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးပါတယ်။ အခုကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်, ရှိသမျှတို့ကိုငါငါ့အသက်ကိုဘာသာရေးပါပြီ, ဒါပေမယ့်ငါသူငါလေးလေးနက်နက်အရာအားလုံးကိုသိမ်းယူပြီမဟုတ်, ဒါကြောင့်အစာရှောငျခဲ့မစဉ်းစားခဲ့ပေ။
ရထားလမ်းကနေသေးသောမည်သည့်တိုက်ရိုက်မတော်တဆမှုဖြစ်မထားပါဘူး, တစ်ဦးတည်းသာရထားတစ်ဦးမောင်းသူမပါဘဲအယပ်စ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်နှင့်တတ်နိုင်သမျှလူအရှေ့ဘက်သို့သွားသောနေဘက်ပြောင်းကြပါပြီနိုင်ပြီးနောက်စပယ်ယာမပါဘဲ, ကစျခုလုံးကိုလိုင်းတလျှောက်ဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုဖို့အားလုံးကို banvakter ဖို့အမိန့်ကိုစလှေတျဖြစ်ပါတယ် မီးရထားနှင့်ဖြစ်နိုင်သလိုအမည်ရအများအပြားခရီးသည်ပျောက်ကွယ်သွားသောအခါ, သူတို့ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ တောင်မှ fjord နှင့်ကမ်းရိုးတန်းစက်လှေမှ, ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူအပေါ်အစီရင်ခံသည်။
ညဦးယံ၌အပြည့်အဝနှင့်နေဆဲ besinnings ဖြစ်လူတွေကိုအားပေးရသောတပုဒ်အတွက်ကြေညာချက်တစ်ခုမျိုးကိုထွက်လာပါတယ်။
အခုတော့လည်းအမေရိကန်ကမှအစီရင်ခံစာများရရှိထားပြီ, ကနော်ဝေအတွက်သူတို့အားသဘာဝအလားတူအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာရဲတိုင်ကြားချက်ထဲမှာစီးဆင်းမှစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအများအပြားလူ့ဘဝဆုံးရှုံးမှုနှင့်တကွ, ပွညျထောငျစုတှငျအတော်လေးဆိုးဝါးအသွားအလာအခက်အခဲဖော်ပြခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသတင်းစာမနက်ဖြန်နံနက် States မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုတစ်ဦးပိုမိုအသေးစိတ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အရလိမ့်မည်ဟုရေးသားခဲ့သည်။
ယခုနှစ်ဆယ်သုည, သုည, နှင့် The အချိန်သတင်းဤဘေးဥပဒ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတူညီသောလမ်းပုံကရှင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်တော်နှင့် ပတ်သက်. အများဆုံးသိအကြီးဆုံးမြို့မြို့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တိုင်းပြည်ကနေမြို့ရွာတို့ကိုယခုထဲမှာစီးဆင်းမှပျောက်ဆုံးများ၏အရေအတွက်အပေါ်ဒေတာအစနေကြသည်။
တစ်ဦးကကြောက်မက်ဘွယ်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်လူညဉ့်များ၏တိတ်ဆိတ်ဖို့သွားဝံ့ကြပါဘူး, လမ်း၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာအကြောင်းကိုခြောကျခြားဖွစျပွီးဆှေးနှေးခဲ့ပုံ, နေရာတိုင်းအောင်နိုင်သွားတာပါပဲ။
ခရစ်ယာန်ပျောက်ဆုံးဒါဟာလုပ်ဖို့ခရစ်ယာန်နှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်အတူကြောင်းနိဂုံးမှ ပို. ပို. လာပါတယ်။ ထိုပျောက်ဆုံးသိထားသူများသည်၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်အတူတစ်သမတ်တည်းပြောနိုင်, ခရစ်ယာန်တစ်ယူသန်သမားများနှင့်ပျောက်ကွယ်သွားကြသူအပြစ်မဲ့ကလေးများရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကဘီယာလုပ်သားများယနေ့ညပြုတတ်ကြ၏ခဲ့, ဟုတ်ကဲ့ပညာရှင် Hans Olsson ဒါကြောင့်ယခုသူနောက်ဆုံးတွင်သူကဒီမှာဖြစ်နှင့် ပတ်သက်. တရားကိုဟောတော်မူပြီထိုလမ်းတယ်, ယခုသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယရှေုသညျမကြာမီသူ့ကိုလာရလိမ့်မယ်လို့။ ဟုတ်တယ်, အခြားပြန်ဖြေတယ်, ငါတို့သည်လည်းတယောက်နှင့်သူလည်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ယခုမူကားအာဏာပိုင်များကောင်းစွာဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရာနောက်တဖန်ဖြစ်ပျက်မနိုင်နိုင်အောင်အားလုံးဘာသာတရားကိုပိတ်ပင်ရန်။ အဘယ်သူမျှမအိုးကနောက်တဖန်ဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်, လူအုပ်ထဲမှာကွှေးကျွောခဲ့။
သူတို့ကဖြစ်နိုင်သူတို့ကဒီတစ်သတိပေးချက်ခဲ့ဘို့, လက်ျာသေးသည်ဤခရစျယာဖြစ်, သာသူတို့ကိုကြားဖူးခဲ့ကြပါပြီဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပိုကောင်းယခုငရဲ၌ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ရှိခြင်းထက်ကရှိခဲ့ပါတယ်, ငါတို့သည်ယခုရှိသောဤပရမ်းပတာတယ် အကြှနျုပျတို့ကိုအုနဲ့ပိုပြီးရလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်သင်သူတို့ကျန်ရစ်သောအခါ, ထိုသူတို့ကိုသင်နှင့်အတူအဖွဲ့ဝင်များထိသင့်တယ်သူတို့ကိုယုံကြည်အခြားကဆိုသည်။ ငါသူ replied နှင့်ကွာသွား လာ. , ငါတတျနိုငျသအလိုရှိ၏။ တစ်စုံတစ်ဦးကသင်နှင့်အားနည်းသောခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာအားလုံးအခြားသူများကိုနှစ်ဦးစလုံး, သငျသညျဆွဲထားခံရဖို့ဖြစ်ကောင်း, သူ့နောက်မှာကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦး sammanhkallat အစည်းအဝေးတွင်ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်တရားဟောဆရာဒါဟာခေါ်ယူခဲ့သည့်အစည်းအဝေးတွင်လက်ရှိအတော်လေးအနည်းငယ်ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်ဝန်ကြီးများဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ သို့သော်များစွာသောလည်းကွာကိုက်ခဲ့သညျ။ ဒါဟာတစ်ဦးနှောက်အာရုံကြောနှင့်တွေများလေထုအုပ်ချုပ်အများအပြားအတော်လေးမပျော်ခဲ့ကြ, အစီရင်ခံစာကဆိုသည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ဖြစ်ပျက်သန့်ရှင်းသူအများခန့်မှန်းပီတိ, ဒါမှမဟုတ်သတို့သမီးဝန်ခံချက်ကြောင်းနည်းနည်းလေးသံသယမရှိ။
တချို့ကသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးသင်တန်းနှင့်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိမိလေ့လာမှုများနေသော်လည်းကြောင့်ဤလမ်းဖြစ်ပျက်မယ်လို့စိတ်ကူးတစ်ခါမျှ, ထိုဝန်ခံခဲ့သည်။ သူတို့ဟာတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းနှင့်ကလေးမွေးစားခြင်း၏ဝိညာဉ်တော်မှတပါးအမျိုးသားတို့သည်ရှိကြ၏။ လူငယ်တစ်ဦးယဇ်ပုရောဟိတ်ငါထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ကြောင့်လေ့လာသင်ယူဖူးဘူးကပြောသည်။ ဒါကြောင့်ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ရာအရပျကိုယူသကဲ့သို့ပါမောက္ခကထိုလမ်းမိန့်တော်မူဘူး။
အဲဒီမှာဆွေးနွေးမှုများအတွက်စိတ်သဘောထားခဲ့ပေမယ့်အာရုံလည်းအဲဒါကိုတုန်လှုပ် factual ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဂျာနယ်လစ်ရေးသားခဲ့သည်။
ရဲအထွေထွေထင်မြင်ချက်ကိုနားထောငျဖို့လူထုမှလှည့်ထို့နောက်သူကသင်တန်းသားများကိုအများစုသဘောတူညီခဲ့သော Synod နေတဲ့အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ဘာဖွစျခဲ့သတို့သမီးဝန်ခံချက်အဖြစ်သို့မဟုတ်ယေရှုကသူ့မိသားစုကိုဆောင်ခဲ့သောလူသိများတစ်ဦးခန့်မှန်းကျမ်းစာအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကကျနော်တို့ယခုအချိန်တွင်ပြောနိုင်အားလုံးပါပဲ။
သူတို့ကဒီဟာဦးနှောက်အာရုံကြောနှင့်ခြောကျခြားဖွစျပွီးစိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့သန္ဓေသားကပြောသည်အခါ, ရဲတပ်ဖွဲ့ယဇ်ပုရောဟိတ် '' ထုတ်ပြန်ချက်များထုတ်ဖော်ဘူး။
ခပ်သိမ်းသောအသင်းတော်နှင့်ဘာသာရေးစီရင်စုနယ်ဝုဏ်အတွင်းပိတ်ပြီးအဆိုပါဖြစ်ရပ်ကြောင့်အစိုးရကိစ္စဖြစ်ရပါမည်ကြောင်းအဖြစ်ကျယ်ပြန့်တဲ့သဘောသဘာဝလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြုမှခရစ်ယာန်ဘာသာတရားနှင့်အတူတစ်ခုခုရှိပြီး, ထို့နောက်သူတို့ပိုကောင်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တယ်တိုငျအောငျအသတ်မရှိခပ်သိမ်းသောအသင်းတော်နှင့်ဘာသာရေးစီရင်စုနယ်ဝုဏ်ကိုပိတ်ဖို့သင့်တယ်နဲ့အရာအားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ ဒီလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုထိခိုက်စေမယ့်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုတစ်ဘုံချဉ်းကပ်မှုဖြစ်လာကြပေမည်။ ဒါကြောင့်လည်းကိစ္စတက် ယူ. နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ကိုယ်ခန္ဓာကုလသမဂ္ဂဖြစ်လာစေခြင်းငှါနေစဉ်။
ခရစ်ယာန်စခန်းလေထုအတွက်အလွန်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေ, ခပ်သိမ်းသောအသင်းတော်နှင့်လူမျိုး၏အပြည့်အဝအခန်းပေါင်း။ တချို့ကအသင်းတော်နယ်ပယ်တရားဟောဆရာများနှင့်အများအပြားအဖွဲ့ဝင်ဦးပျောက်ဆုံးခဲ့ကြခြင်းမရှိဘဲရှိကြ၏။ များစွာသောဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ကျဲပါးယုံကြည်သူများဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။
သို့သော်ထိုအသင်းတော်ကိုအပြင်ကလူ၏ကြီးမားသောရောက်လာခဲ့အများဆုံးကိစ္စများတွင်သူတို့သင်ကထည့်သွင်းသောကြီးမားသောမတော်တဆတွေ့ဆုံခဲ့ခဲ့ကြသည်။ ပြည်သူ့ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောငျခငျြတ, ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာကျော်ကကဲ့သို့ဖြစ်၏, တဖတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သူကငါမဖတ်နိုင်ကပြောသည်။
စွပ်စွဲတရားဟောဆရာအများစုကလည်းဘုရားသခင်၏အကူအညီကိုရှာထံသို့ လာ. , သူတို့ကအလှနျမပျော်ခဲ့ကြ, အကြံပေးအရှိဆုံးအစည်းအဝေးများသို့သျော, ရှုပ်ထွေးမှုများ clean ။ လူ clenched လက်သီးနှင့်အတူရပ်နေ၏နှင့်တစ်ဦးတရားဟောဆရာမှကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကို၏ဤမျှလောက်များစွာသောကျန်ရစ်ခဲ့ကြကြောင်းကိုသင်၏အမှားဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျယရှေုကိုမကြာမီလာနှင့်သူ၏မိသားစုဆွဲယူနှင့်သန့်ရှင်းသောနှလုံးရှိခြင်းအကြောင်းကိုပင်လျော့နည်း, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝကြလိမ့်ရန်မယ်လို့ကပြောသည်ဘယ်တော့မှမ။ တဖန်ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏သူချင်းယောက်ျားနှင့်ကြိုတင်စီစဉ်ထားအရာအားလုံးရှိသည်ဖို့, ငါပြန်စောင့်ရှောက်ခဲ့သည်အရာကိုသိ, ကန့်နည်းနည်းအမှုအရာပါပဲ, ဒါပေမယ့်သခင်အကူအညီနဲ့။ Tig တရားဟောဆရာကပြောသည်။
မိမိတာဝန်ပြုသမျှခံစားရတယ်နှင့်အရှင်အခြားပေါ်တွင်တဦးတည်း, ထိုအော်သံနှင့်အော်ဟစ်အပြစ်တင်ပါတယ်။ သူတို့ကတံခါးကိုအပေါ် banged ပေမယ်ကိုလည်းပိတ်ထားခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်ပြည်နယ်, ဖော်ပြခဲ့မရနိုင်ပါ။ လူတွေကတစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအချိန်လက်မှာ, ကအားလုံးကိုမျှော်လင့်ချက်ပျောက်ခဲ့သောလေယာဉ်တူကြောင်းကိုသတိပြုမိခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ Bang ကြွေးကြော်သံ, အချည်းနှီးသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်စကားနှင့်အတူအကြောင်းအရာခဲ့သောသူအပေါင်းတို့, အခြို့ကွန်မြူနတီရဲ့မျက်နှာကို ထောက်. , ဂီတနှင့်သီချင်းအတွက်ဒုတိယသာကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးစီးပွား, နှင့်တူနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ အားလုံးနောက်တဖန်မွေးဖွားလာကို၎င်း, မွေးစားပိုင်ဆိုင်မရှိ, ဤသို့လည်းအမွေ၏ညာဘက်ဖြစ်ဘဲလျက်။ ဟုတ်ကဲ့အများအပြားစီရင်စုနယ်ဘဝကသာမိမိဆန္ဒအလျောက်ဒါမှမဟုတ်ပိုမြန်သွားဖို့အခမဲ့အချိန်ရရမယ့်ဝါသနာခဲ့သည်။ ယခုမူကားထိုသူအပေါင်းတို့သည်တံခါးပိတ်တံခါးဝရက်တွင်ဖြန့်ကြဲ။ အကြှနျုပျတို့အားပွင့်လင်းသခင်, သခင်။
တတိယကမ္ဘာ့စစ်ဤအမှုအလုံးစုံမှတတိယအဓိကစစ် ပတ်သက်. စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောကောလာဟလများမည်သည့်အချိန်တွင်ထွက်ကိုချိုးဖျက်နိုင်လာ၏။ အရှေ့နှင့်အနောက်နှင့်အတူအဆိုပါသံတမန်ဆက်ဆံရေးကျိုးပဲ့ပျက်စီးခဲ့သညျ။
အားလုံးခရစ်ယာန်လှုပ်ရှားမှုပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်ရတဲ့အခါကပီတိမှကြွလာနှင့်ခရစ်ယာန်, ဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်ကာလပတ်လုံးအာဏာပိုင်များမယူခဲ့ပါဘူး။ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေခဲအတွက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအပေါင်းတို့နှင့်ခရစ်ယာန်လှုပ်ရှားမှုများအပေါင်းတို့နှင့်ခရစ်ယာန်စုဝေးပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့သတင်းစကားတို့သည် လာ. အရှေ့အုပ်စု မှစ. ။ ယေရှု၏နာမကိုဖော်ပြထားခြင်းမှတားမြစ်ထားသေဒဏ်၏ခြိမ်းခြောက်မှုခဲ့သည်။
ကိုမီးရှို့အရာအားလုံး Top-မယ်လို့အဆိုပါနိုင်ငံများကမျြးစာကိုသားအပေါငျးခရစ်ယာန်စာပေ၏ရှင်းလင်းမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအများ Imprint ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏သို့မဟုတ်ခရစ်တော်၏သတိပေးကြောင်းအရမ်းအနည်းဆုံးပိုင်ဆိုင်သေခြင်းဆိုလို၏။ အနောက်ပိုင်းပြည်နယ်များမှာ, ထိုကဲ့သို့သောပိတ်ပင်မှု statutory မှအနည်းငယ်ကြာကြာယူလေ၏။
သို့သော်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်လူအနှစ်ဦးစလုံးအကြားအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြေရှင်းရန်၏ဘုရားဖွစျခဲ့ပွီးဘယ်သို့သောအားဖြင့်စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်အရာတစ်ခုခုကိုပြုရမည်ဟုစီတန်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလူများစုခရစ်ယာန်ဘာသာထိုအဖြစ်အပျက်များ၏အကြောင်းရင်းရလဒ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးစဉ်အခါ, စွာတည်လေ၏။
လူ့သမိုငျးတှငျခပ်သိမ်းသောကာလ၏အများဆုံးကြောက်မက်ဘွယ်သောထို့ကြောင့်လူ့သမိုင်းမှာခပ်သိမ်းသောကာလ၏အများဆုံးကြောက်မက်ဘွယ်သောစတင်ခဲ့သည်။ အစွန့်ပစ်ခရစ်ယာန်တစ်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုဘုရားသခင်အားအော်ဟစ်ဆက်လက်နှင့်အာဏာပိုင်များ '' ပိတ်ပင်ထားမှုနှင့်အတူလိုက်လျောခဲ့ပါဘူး။
အဆိုပါထောင်ဒဏ်အစစ်အမှန်ဂက်စတာပိုနည်းလမ်းများမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျယရှေုခရကျိန်ဆဲစေခြင်းနှင့်ငွငျးပယျလိုလျှင်, သင်သည်သင်၏အသက်ကိုကယ်နိုင်ကဆောင်ပုဒ်ခဲ့သည်။
သို့သော်ထောင်ပေါင်းများစွာတည်ကြည် ရှိ. , massmördandet ပြော. မကုန်နိုင်ခဲ့။ သူတို့အသေခံသည်အထိအများစုကဆိုးရွားစွာနှိပ်စက်ခဲ့သည်။ ပို, စာတန်မြည်းကြိုးကိုဖြည်လွှတ်ပေးခဲ့သည်ဘယ်တရားမျှမရှိခဲ့သည်။ မြေကြီးတပြင်မင်္ဂလာရှိ၏နှင့်ပေါ်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်သောသူတို့အား!
ဆင်းရဲဒုက္ခ ဖြစ်. ယုအတွက်အများအပြားလူစုကို ပေး. ရှိသူတို့ကလောကဓာတ်လုံးအဓမ္မအမှု၌ရှိရာခဲ့, ပြေးရန်မရာအရပျခဲ့သညျ။ နိုင်ငံအားလုံးခရစ်ယာန်တွေကိုအမြစ်ပြတ်ရမည်ဟုသဘောတူခဲ့သည်။ ဤလောက၏အမင်းသားယခုအာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့သည်။ ကလေးများသည်အသေသတ်ခြင်းကို၎င်းတို့၏မိဘများအပျနှံ။ အခုတော့လု၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ထားတဲ့စစ်မှန်တဲ့ခဲ့သည်။ 21: အောက်တိုဘာလ 16 - 17
သင်ပင်မိဘများနှင့်ညီအစ်ကို, ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများအားဖြင့်အပ်နှံကြလိမ့်မည်, သင်၏အချို့သောသေဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုအခါသင်တို့သည်ငါ၏နာမကြောင့်လည်းခပ်သိမ်းသောမုန်းကြလိမ့်မည်။
ဒါဟာအခွအေနေကိုဖော်ပြရန်မဖြစ်နိုင်ဘူး, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းတပြင်လုံးကိုပုံဖော်ထားပါတယ်။ ထိုကံမကောင်းစွာ၏ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းရှိကြ၏။ သခင်ဘုရား! သငျသညျဤသည်နေ့ရက်ကာလသူတို့ကိုအတိုကောက်ပါစေ!
သငျသညျကျန်ရစ်ခံရအန္တာရာယ်မည်မဟုတ်ပါ။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာရှေ့မှာ သွား. , ကယျတငျတျောမူခွငျးနှင့်ကျေးဇူးတော်၏နှိမ့်ချမေးပါ။ ယနေ့ပင်, ကအချိန်ဖြစ်ပါသည်, ယနေ့သင်သညျယရှေုခရစျသရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်, သူသည်တော်အပေါင်းရတဲ့အခါသင်အဲဒီမှာရှိနိုင်ပါသည်။
Postscriptအဆိုပါအချိန်အဘယ်သူမျှမကခရစ်ယာန်တွေကိုရီးယားနီးပါးရှိ၏။ အခုကအဲဒီမှာတထောင်တရာအများအပြားဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဘုရားသခငျကိုရီးယားအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသိကြည့်ရှုပါ။
အဆိုပါအချိန်သံကုလားကာနောက်ကွယ်မှ 1952 ဆိုဗီယက်ခဲ့ပေမယ့်ရှစ်ဆယ်အတွက်ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားဘူးအပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိ၏။
Perestroika လာ. , ယခုအဖြစ်ကြာမြင့်စွာကယခုကြာအဖြစ်အရှေ့နဲ့အနောက်အကြားကောင်းတစ်ဦးဆက်သွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ယောဟန် 3: 16-17
ဘုရားသခင်အဘို့ဤမျှသောသူမည်သည်ကားကိုယ်တော်၌ယုံကြည်သောပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပေမယ့်ထာဝရအသကျကိုမသင့်ကြောင်းသူကတပါးတည်းသောသားတော်ကိုပေးသော, လောကီသားကိုချစ်၏။ ဘုရားသခင်အဘို့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှုတ်ချဖို့ဤလောကသို့မိမိသားတော်မစေလွှတ်သော်လည်းကမ္ဘာပေါ်တွင်သူ့ကိုအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အကြောင်းတည်း။
အားဖြင့်အနာဂတ္တိ Olav Rogde အားဖြင့်တင်သွင်းသည် Kaj Östholm ။
SannaMycket berörd av detta. Jag har personligen hört två personer berätta att två av deras anhöriga försvunnit plötsligt. Och båda två är kända som gudaktiga.Svara - - 11/12-16 12:25 - Ditt svar
Thomas PI höstas mötte jag flera sydkoreaner på besök i Europa. Det som slog mig var att flera av dem blev helade när jag bad för dem.
Vår tro, är ett hjärtas inställning. Tycker detta är så tydligt; ödmjukhet, omtänksamhet, godhet, medkänsla, glädje, tacksamhet, givmildhet, kärlek - allt sitter i och kommer från hjärtat.
Det spelar ingen roll vilken etnicitet du har, från vilken kultur, eller om du kallar dig katolik eller muslim, Jesus söker upp de med rätt attityd i sina hjärtan, de med kärlek till lagen, utan att de ens känner till denna Guds Lag. Vissa kanske har en hårdhet, kanske är kriminella idag, men Jesus kan spräcka det skalet med en fingerknäpp!
Vår Gud är stor och god, och vi är skapade med samma attribut som Honom. Men vi har många gånger blivit egenkära, snåla, likgiltliga och tänker mest på oss själva. Lägg ner ditt egna liv och du kommer få ett nytt genom Jesus Kristus. Gör det medan tiden finns, för jämmer här jorden till, i himlen är det bara lovsång.Svara - - 11/12-16 13:14 - Ditt svar
SannaSvar till Thomas P. Bra sagt, du har helt rätt.Svara - - 11/12-16 13:28 - Ditt svar
SSvar till Sanna.Jag har personligen hört två personer berätta att två av deras anhöriga försvunnit plötsligt.
Jag antar man anmält dessa som saknade till polismyndigheten.
För ni är väl inte så tokig att ni antar att Gud hämtat hem någon så fort denne saknas? Svara - - 11/12-16 14:10 - Ditt svar
Ingemo JonsällChrister Åberg
Eftersom du inte tål att man prövar alls det du skriver, så kommer jag hädanefter att varna för dig och din sida. Att du dessutom rent ut ljög om vad jag skrivit under ditt inlägg om frälsningen, gör dig inte bara till en falsk profet, utan en lögnare, och di kan väl din Bibel väl nog för att förstå vart jag går med det. Bevisligen tror du inte att alla lemmar i kroppen behövs, utan din är den enda som behövs. Och därför finner jag nu inget val utan kommer varna för dig och din sida. Vilket smärtar mig. Jag vet nämligen att jag inte är perfekt, men det vet tydligen inte du om dig själv. Vilket jag finner tragiskt.
Och alltihopa där du stryker bort folk som inte till hundra procent delar din åsikt, gör det mera likt en sekt än något annat. Detta smärtar mig mer än jag har ord. Men du ger mig inget val.
mvh Ingemo, Svara - - 11/12-16 15:44 - Ditt svar
Lena henricsonJa, Jesus kan komma och hämta de sina (oss) när som helst nu!!Svara - - 11/12-16 19:07 - Ditt svar
AstroDet här är bara fantasier! 99,99% chans att det inte kommer att ske på det viset.
Men visst vore det coolt med lite "fantasy /sciense fiction " i verkliga livet :0)
Gud hämtar hem oss när vi dör. Kroppen blir kavar på jorden. Den är som gamla kläder vi inte mer behöver i himmelriket!Svara - - 11/12-16 19:39 - Ditt svar
EmiratusSvar till Astro. Astro,
"Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar" Matt 24:40-41Svara - - 11/12-16 20:58 - Ditt svar
JeanJag tror exakt att så kommer det att bli.
Men nu, vänner, vilar nåden över oss! Nu kan vi alla göra oss redo för det första uppryckandet. Och du, som inte är frälst, jag vill varna särskilt dig. En del kanske säger, att jag nedtecknat detta för att skrämma folk. Det är inte sant, för då kunde vi ju riskera att våra församlingsmedlemmar blev rädda. Nej min vän, detta är ett budskap från himmelens Gud. Visserligen ett skakande budskap, men det är en appell, var det heter: - Försona er med Gud. Stå upp! Skaka fördomar och förutfattade meningar av dig och träd fram och sök nåd, medan nådens dörr ännu är öppen. Natten kommer, då ingen församling mer kan verka på jorden. Idag, om du hör Herrens röst, så förhärda inte ditt hjärta. Ty om du framhärdar i att förkasta Guds kallande röst, kom då ihåg, att då skall du bli kvar här i natten.
Men i dag är Golgata källa öppen, den källan, som sprang fram, då Jesus, vår Frälsare, en gång ropade på korset: Det är fullbordat! Den källan väller fram idag. Det finns möjlighet till frälsning, till rening från synden för dig och salig är du, om du vaknar. Amen.
Upp 12:5	Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med järnspira, och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron.
Bibeln säger att han blev uppryckt till Guds tron. På samma sätt som Jesus har blivit uppryckt så kommer de som tror på honom bli uppryckta. Jesus är garanten för vårt uppryckande. Han har gått före oss och vi kommer att få vara med om samma sak
Jesu fridSvara - - 11/12-16 21:26 - Ditt svar
Bengt LundSvar till Ingemo Jonsäll.Min älskade Ingemo.
Svara - - 11/12-16 21:50 - Ditt svar
israelsdotterSvar till Bengt Lund. Ingemo är min syster. O ja gillar inte när män skriver älskade lilla vän typ... om ja frågar dig bengt lund. Är du född på nytt? Man märker klart o tydligt att ingemo är äkta jämfört med andra på denna sida.Svara - - 11/12-16 22:52 - Ditt svar
israelsdotterSvar till Ingemo Jonsäll. Tänk om vi kvinnor prata med män så som vissa talar till oss.. min älskade. Men lilla gumman. Osv.. om ja sa så till en man skulle det va förnedrande. . O ingemo stor kram till dig! Ja fattar inte vf christer tar bort dina kommentarer. Du ha inte sagt nåt fel.Svara - - 11/12-16 23:11 - Ditt svar
EmiratusGud klarar sig väldigt bra utan mig och mina synpunkter här på nätet.
Ödmjukt vandrar vi tillsammans med HerrenSvara - - 11/12-16 23:14 - Ditt svar
Thomas PInget om Israel i denna profetia?
Stämmer den då?Svara - - 11/12-16 23:54 - Ditt svar
NinaSvar till Ingemo Jonsäll.Vad skall du varna för Ingemo En falsk profet är den som förkunnar utanför Guds ord En som lägger till tar ifrån säger mer eller mindre Har inte uppfattat att Christer gör det snarare tvärtom Svara - - 12/12-16 00:01 - Ditt svar
DuvanSvar till Sanna. Sanna. Du skriver att du hört berättas att två personer försvunnit plötsligt. Gudaktiga. Menar du att du tror Gud tagit upp dom till himlen ? Jag tror inte det, för när Jesus ska hämta oss, så är det ALLA, inte tar Han några åt gången. Så står det inte i bibeln. Svara - - 12/12-16 00:17 - Ditt svar
israelsdotterSvar till Emiratus. M ja kan ödmjukt ställa mig o hålla käften o behandla min nästa som mobbar mig, bättre.. än mig själv.Svara - - 12/12-16 03:43 - Ditt svar
VanessaSvar till Bengt Lund. du behöver också födas på nytt käre Bengt!Svara - - 12/12-16 06:11 - Ditt svar
SSvar till Vanessa.du behöver också födas på nytt käre Bengt!
(Är det nån slags lek detta eller?) Svara - - 12/12-16 06:42 - Ditt svar
EmiratusSvar till S. "Du också kära Vanessa!!"
(någon ny form av följa John)Svara - - 12/12-16 07:30 - Ditt svar
Sineps RetsirhcMycket bra artikel. Vår församling har fått samma meddelande. De två vittnar om samma sak.Svara - - 12/12-16 08:00 - Ditt svar
Ingemo JonsällSvar till Bengt Lund. Ja det är jag. Och jag tror inte min make skulle gilla att du kallar mig älskade, du borde åtminstone lagt till vän efter i så fall, eftersom jag ju inte är din älskade. Sedan skulle det vara intressant att veta varför du ställer den frågan.
Svara - - 12/12-16 12:37 - Ditt svar
Peter HallRapporten förtäljer inte om någon trafikolycka i Norge inträffade i samband med att människor sades försvinna.
Vår Gud är ordningens Gud och inte oordningens. Han har bestämt ett bättre sätt, när människor skall hämtas till himmelen. Vad är det för mening, att "uppryckningen" skulle vara synlig för världen?
Det troliga är, att när en Jesu lärljunge dör, så förvandlas denne omedelbart till en himmelsk varelse.
Övriga blir inte levande förrän efter de tusen åren.
"Levande" i den bemärkelsen, att de aldrig mer skall behöva dö. Innan dess kan de ha trätt inför Kristi domstol en eller flera gånger, för att få igen sitt jordelivs gärningar. Svara - - 12/12-16 14:38 - Ditt svar
Inget om Israel i denna profetia?
Stämmer den då?
Jag tror naturligtvis inte att den stämmer vare sig med eller utan Israel men om man tror på den kanske man skulle fråga sig om ingen jude var redo och fick följa med!?Svara - - 12/12-16 15:02 - Ditt svar
EmiratusDet värsta som skulle kunna hända är väl om Sverige spelar final i fotbolls-VM, och 2-3 svenska spelare plötsligt rycks upp i himlen.
....nu är ju inte Zlatan med i landslaget så han kan ju inte frälsa oss längre....vilken tur...annars kanske hela laget skulle ryckas upp i himlen Svara - - 12/12-16 17:04 - Ditt svar
AstroSvar till Emiratus.Så du förnekar nedanstående bibelverser? Nja, förnekar och förnekar, men jag är lite skeptisk ))
Bibeln verkar dock vara mer symbolisk än praktisk ....oftast ....Svara - - 12/12-16 22:08 - Ditt svar
Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Ordspråksboken 3:5Svara - - 12/12-16 23:29 - Ditt svar
David StrömSvar till Astro. Vill du tro så finns det alla möjligheter. Jag anser att vittnesbörden är så många att även själva antalet bevisar att Jesus lever. Jag skulle kunna mata dig med filmklipp tills du tror. ¤¤https://www.youtube.com/watch?v=6KnLDsq4XXA
Svara - - 13/12-16 03:38 - Ditt svar
Peter HallSvar till Emiratus."Förlitar man sig mer på sin egen intelligens och sitt eget intellekt, så finns det en risk att man missar det Gud vill nå oss med."
Svara - - 13/12-16 09:28 - Ditt svar
AstroSvar till David Ström. Jo visst en fin film!
Plötsligt händer det! Men allt för sällan...
Har själv sett ett under, tror på Jesus, men tror inte på ALLT som står i bibeln.
Är väl lite skeptisk till min natur. Allt är inte "guld och gröna skogar" runt kristenheten som jag trodde från början.
Det är stor skillnad på verklig andlighet/kontakt med Gud och en religiös fanatisk yta.
Gäller bara att hitta "kontakten". Det finns så mycket "störningsoment" i livet som gör att man inte kan komma så nära Gud som man vill alltid...Svara - - 13/12-16 10:06 - Ditt svar
Kommentaren jag gav var riktat till Astro, som gärna vill finna vetenskapligt belägg på mångt och mycket. När det gäller innehållet i bibeln så menar jag att vi måste läsa den med öppet sinne och inte med ett vetenskapligt kritiskt intellekt. Det är skillnad på att "tro som ett barn" och att "bevisa något vetenskapligt", så om du väljer det sistnämnda så kan du gå miste om vad Gud vill säga dig när du läser bibeln. Vi ska inte tro att vi är intelligentare (eller förståndigare) än Gud, som ju skapat allt, utan vi måste lägga undan detta kritiskt vetenskapliga tänket när vi läser bibeln och istället öppna vårt hjärta (nej, inte på hjärtkirurgi)
(Om du är troende kristen och vetenskapsman, som Astro, så har du en fördel och kan förstå vad jag skriver, men om du är vare sig troende eller vetenskapsman rekommenderar jag dig att betrakta dig själv utifrån, eftersom det finns en risk att du befinner dig i en ständigt roterande rörelse med orden ga-ga-ga-ga flödandes ur din mun ) Har vi uppnått konsensus?Svara - - 13/12-16 12:37 - Ditt svar
Henryrepentsweden.se varnar för Basunklang och Messias ankomst nu.Svara - - 13/12-16 13:56 - Ditt svar
Peter HallSvar till Emiratus.Den som inte har Kristus i sig lär inte kunna förstå vad Skriften vill förmedla. Således lär en vetenskapsman utan tro inte kunna utforska Bibelns djupheter.
Svara - - 15/12-16 09:55 - Ditt svar
David StrömDet finns sammanställda tecken i klipp på Youtube. Man hör basuner, man ser blodröda floder. Förr så sprang Jehovas runt och varnade, men nu kan man själv se vad som händer. Men nu är alla tysta. Märkligt! Vem undervisar om vad Jesus menar med Saliga de som är fattiga i anden? Vem undervisar om lampoljan som de oförståndiga saknar? Hur många förstår liknelsen om lampan och ögat?Svara - - 19/12-16 17:17 - Ditt svar
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကလုံးဝကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်မဟုတ်။ သူသညျယရှေုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးပါခင်ဗျားဘာလို့လဲဆိုတော့သူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဖူးသူခရစ်ယာန်တစ်ဦးမဟုတ်ပါ။5Läs allt!နွေရာသီစာဖတ်ခြင်း: အဆိုပါအရှည်ဆုံးညဥ့်
ကအားလုံးကိုအနိုင်ရတစ်ဦးကဟုတ်မှန်သည့်မသိမမြင်နိုင်သောဆုံးရှုံးမှု၏ဇာတ်လမ်းနှင့်။0Läs allt!ဆုတောင်းပဌနာအဖြေများကို - Johan Gustafsson အစ္စလာမ်မစ)ရုပ်ပုံ: နေ့။ 2011 ခုနှစ်တွင်မာလီအတွက်အစ္စလာမ့်အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုကိုအယ်လ်ကေးဒါးတို့ကပြန်ပေးဆွဲခဲ့သူVärnamoမှ Johan Gustafsson, 42, ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးရုံဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးပြန်ပေးဆွဲ။ ပဲန်တီကော့စအသင်းတော်၌နေသောမိဘများပဌနာဖြေကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်!14Läs allt!မဟာရိတ်သိမ်းnils အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် သခင်ဘုရားပြုတော်မူမည်အရာကိုအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဗျာဒိတ်တော်: ကြီးစွာသောစပါးရိတ်ရာကာလ!25Läs allt!RFID ချစ်ပ်များ၏ Sanna ရဲ့အိပ်မက်အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် nils "ထိုအခါအကြှနျုပျသ chip ကိုကြိုက်နှစ်သက်မှ, stepwise (ဖြည်းဖြည်း), ဒါကြောင့်သူပြီးသားပရိုဂရမ်နှင့် brainwashed ထားပြီးဆိုလိုကြောင်းသိသည်။ "99Läs allt!"သားရဲ၏ လာ. ကွညျ့"အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် nils
Dagens bibelord “Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älska honom.” (James 1:12) I dag är det 28/06-2017 kl. 02:14 v. 26 och Jesus söker
Elsa : Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Katrina: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet NT: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Katrina: Den Stora Skörden Sanna: Den Stora Skörden Leif Boman : Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Sanna: Den Stora Skörden Sanna: Den Stora Skörden Sanna: Den Stora Skörden Sanna: Den Stora Skörden David B: Katolska kyrkan förnekar att helvetet är en plats Katrina: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Erik S: Katolska kyrkan förnekar att helvetet är en plats Katrina: Påven är inte frälst Johan: Påven är inte frälst Lasse: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Katrina: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Katrina: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet AnnMarie : Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet AnnMarie : Påven är inte frälstကလေးသူငယ်များမဲပေးရ?အစိမ်းရောင်ပါတီ Lorentz Tovatt ပါလီမန်မှာအာသနန်းစံ Romsons လက်ထောက်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ 2013 ခုနှစ်တွင်သူသည်မဲပေးအသက်အရွယ်ဖျက်သိမ်းနှင့်ကလေးငယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးရသင့်ကြောင်းသင့်ကြောင်း Twitter တွင်ရေးသားခဲ့သည်!6Läs allt!ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံကိုအသငျးတျောကျော်တန်ခိအဘယ်ကြောင့်ငရဲကိုအသင်းတော်ကျော်တန်ခိုးမရှိရှိသနည်း သခင်ဘုရားသည် - ယေရှုခရစ်တော်၏မေရှိယကိုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ယရှေုသညျမေရှိယကို, သခင်ခဲ့လျှင်, အားလုံးငရဲအသငျးတျောကိုအုပ်စိုးခဲ့ကြပေသည်။3Läs allt!Aktuelltရှုပ်ထွေးသိပ္ပံပညာရှင်များဝဠာကြောင်း ..လေးမှားယွင်းသောဘာသာတရားများအတွက်ပုတီDen muslimska jungfru MariaEndast hos Jesus finns frälsningen - Femte delenသငျသညျလက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်းတရားဒေသနဥပုသ်လ 15 ရက်အကြာမှာဦးသေဆုံးပြီး 1053မွတ်စ်လင် 10 နှစ်ကြားရှိဆရာများခေါင်းဖြတIS-blogg uppmanar till terror i Sverige666 ကုရ်အာန်စတင်12 ရက်အတွင်းနိုင်ငံပေါင်း 21 နိုင်ငံအတွက်ဿ